Creative Writing » မှတ်သားခြင်း သညာတဲ့	38
ဈာနပစ္စယောတိ……….. ခုထိမရပ်ဘူး။ တော်တော် တရားလွန်ပြီ။ငါနော်…
အတ္ထိပစ္စယောတိ……………. ကဲ၊မြန်မြန်ပြီးမှပဲ။သည်းခံလေ၊ရောင့်တက်လေ။ပြောကိုပြောမှဖြစ်မယ်။ရပ်ကွက်လည်း တိုင်မှ၊
ဂျီဂျစ်ဂျစ်ဂျီ……………………… ဟာ၊ဒီကောင်တွေ လွန်လွန်းလှချည်လား။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကျောင်းသားဆိုးတွေ ဖြစ်မဲ ခိုနီအာတီဒုံဂျီး.. ကူမြူ နစ်လည်း ဖျစ်နိုင်ဒါဗဲ….
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကိုကိုကြောင် ညည ညှောင်သံပေးရင်လည်း ခုလို မေတ္တာပွားနော် အာတီဒုံ..
padonmar says: ညောင်သံပေးရင်တော့ အမြီးဖြတ်ဖို့ ကပ်ကြေးနဲ့လိုက်မှာ။
မြစပဲရိုး says: အစ်မဒုံ စာဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။
padonmar says: မလတ်ရဲ့
Mike says: .အာတီဇီးကွက်
.အိပ်တော့ ရွှေဇီကွက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ဦးမိုက် လက်တန်း ကဗျာကလည်း မိုက်ပါ့ဗျာ။
Ma Ma says: ဇီးကွက်နဲ့ပြောင်းပြန်ဆို ဘာငှက်လို့ ပြောရမလဲ။
အဲဒီအချိန်မှာ အိပ်ကောင်းနေလို့ ဆင်အော်လို့တောင် နိုးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိပြီး ဒီလောက်ထိန်းနိုင်တာပဲ တော်လှပြီ။
ကိုယ်တိုင်ဆို ဘုရားရှိခိုးတဲ့အထိတောင် ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ဇီးကွက်နဲ့ ပြောင်းပြန်က ကျီးကန်းလေ။အဲလို မဲမဲကြီးတော့ မကောင်းပါဘူး။စောစောထတဲ့ စာကလေးကလည်း မြက ဦးသွားပြီ။ဇရက်ပဲ လုပ်တော့။
aye.kk says: ဖောင်းပိန်မှတ်နေပေမယ့်လို့
padonmar says: ဟုတ်ပါ့အေးကေရေ၊
အောင် မိုးသူ says: စိတ်ဆိုတာအခက်သား။ ခုဖြစ်သလို အမှတ်သညာစိတ်လေးဟာ လူတော်တော်များများမှာ ဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်ဖူးတယ်။ အချို့အချို့ဟာ အဲ့လိုဖြစ်နေမှန်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိကြဘူး။
padonmar says: ဘကြီးအောင်ရေ၊
Kaung Kin Pyar says: စိတ်ထဲဖြစ်နေသမျှ ဖမ်းမိတဲ့ အာတီဒုံ့ကို ချီးကျူးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဆို ဟိုဘက်အိမ် ဂဲတစ်လုံးပစ်ပြီးလောက်ရော့ ပြီးတော့ ဘုရား ခြေဆေးရေကပ်တယ်လို့လဲ တွေ့လိုက်မိသေးတယ်……
padonmar says: ကင်းကောင်လေးရေ
​ဒေါ် လေး says: အစ်မရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်
padonmar says: ကင်းကောင်ပြာနဲ့ ဒေါ်လေးတွက်
မြစပဲရိုး says: အစ်မဇီးကွက်
padonmar says: ဘုရားဆင်းတု သေးသေးလေးက ဒါပဲ တတ်နိုင်တာကိုး မလတ်ရယ်။အိမ်အနေအထားနဲ့ နေရာပေးနိုင်မှု၊ ငွေကုန်ခံနိုင်မှုပေါ်တည်ပြီး ကိုးကွယ်ရာ ဆင်းတု အကြီးအသေးကွာတာပေါ့။
padonmar says: sorry ပါနော်။ကိုယ်တွေတုံးက အခြေအနေပေးရက်နဲ့ ဗဟုဿုတ နည်းခဲ့တော့ ဘုရားကို ဆွမ်းကပ်ရေချမ်းကပ်တာ အဖြစ်ပဲ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ဒါ့ကြောင့် ဆရာလုပ်သလို အစွန်းရောက်သလိုပြောမိပါတယ်။ တကယ်တော့ စိတ်က အဓိကပါ။အခြေအနေပေးပြီး သဒ္ဓါလည်း ရှိပါရက် ကျမလို ဗဟုဿုတ နည်းခဲ့သူများအတွက် လမ်းညွှန်ပေးတာပါ။
မြစပဲရိုး says: အစ်မဇီးကွက် ရယ်
ခင်ဇော် says: ရှေ့ စိတ် ကို နောက် စိတ်က သတိနဲ့ သိကပ် မိတာ ကိုက
​ဒေါ် လေး says: ကျေူးဇူးပါ အစ်မရေ
padonmar says: ဒေါ်လေးရေ၊
kai says: ဂျပန်တွေမှာ.. အစားအစာတခုခုစားခါနီးတိုင်း.. itadakimasu (いただきます, literally, “I humbly receive”).ဆိုတာရွတ်လေ့ရှိသလို.. စားပြီးရင်လည်း…gochisōsama-deshita (ごちそうさまでした?, lit. “you wereafeast (preparer)”). ဆိုတာရွတ်ပြောရလေ့ရှိတယ်.။
kotun winlatt says: အဟီး အံတီဒုံ ကျနော်တို့မိသားစုနေတဲ့ အိမ်ဘေးပတ်လည်မှာ ကျွန်းတံခါးချပ်တွေလုပ်တဲ့ အိမ်တွေရှိနေတယ် တစ်နေ့လုံး စက်ရွေဘော်သံတွေ လွှဝိုင်းသံတွေ ဆူညံလို့ပေါ့။ ဆူညံသံကို ထပ်ဖြည့်ပေးတာက အိမ်ရှေ့အိမ်က သုံးဘီးဆရာ သူက သုံးဘီးမောင်းသလို သူများသုံးဘီးတွေကိုလည်း ပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့ လီဗာဟဲသံက ညံလို့ပေါ့ ။ ဒါက နေ့ပိုင်း ညပိုင်းရောက်ပြန်တော့ တံခါးချပ်လုပ်တဲ့ အိမ်တွေဆီကနေ တံခါးချပ်သယ်တဲ့ သုံးဘီးသံ ကျွန်းပျဉ်လာချတဲ့ အသံတွေနဲ့ ဆူညံလို့ပေါ့။ ဒါတရားမဝင်လုပ်ငန်းနော့ ဘယ်သူကမှ အရေးမယူဘူးလားလို့ မေးမယ် ။ ဆိုင်ရာတွေက အရေးမယူဘူးလားလို့မေးစရာရှိမယ် ဘယ်ယူလိမ့်မလဲနော့ ။ လွှတ်တော်အမတ်ဆိုတဲ့လူကိုယ်တိုင်က ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်စားနေတာလေ။ ဆိုတော့ကာ အံတီဒုံဖြစ်သလို စိတ်တွေက ကျနော့်မှာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှဖြစ်နေတော့တာရယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို ပြောလည်းပြောချင်တယ်ပြောလည်း မပြောရဲပါဘူးလေ။
padonmar says: ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရေ
kai says: ဆွမ်းကပ်တာ.. ရေကပ်တာ… ရုပ်ထုတခုကို… ဘာကပ်ကပ်.. ဆိုတာတွေကတော့.. အိမ်မှာလည်း.. လေဒီခိုင်က..ကပ်နေပေမယ့်… ဖြုန်းတီးရာရောက်တယ်လို့.. ယူဆတာမို့..
အဲ့ဒါလာပြောတာ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ဖြုန်းတီးရာ မရောက်အောင် ဆွမ်းတော်စွန့်ကို အိမ်သားတွေ ပြန်စားတယ်လေ။တချို့ဆို လူတယောက်စာ ကပ်ပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူကို နေ့စဉ်ပေးတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မ မာရေးတာ ဖတ်ပြီးတော့
padonmar says: ကပေါက်ကြီးရေ
pooch says: ကိုယ်တွေသာဆို သေချာတယ် ခဲနဲ့ ပေါက်မိမှာ အဲ့လောက်အကြာကြီးတွေးမိနေမှာ မဟုတ်ဖူး
စိတ်က လက်တဆစ်ရယ် ကိုယ့်စိတ်က ဖြစ်နေတာကို သိစ်ိတ်က လိုက်ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့အားမဟုတ်ဖူး
padonmar says: မယ်ပုလေး၊
weiwei says: ကျွန်မအိမ်က ဘုရားကိုတော့ တစ်ခါထဲတောင်းပန်ထားပါတယ် .. အောက်ထပ်ကအိမ်မှာပဲ ဆွမ်းဘုန်းပေးပါလို့ .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ဝေရေ
Foreign Resident says: Very Good Post !!!
padonmar says: ပေါ်တော်မူ အဘ၊
Alinsett @ Maung Thura says: .မြေနီကုန်း ကုန်းကျော်တံတားအပါအဝင်…အခုနောက်ပိုင်း ဆောက်လိုက်တဲ့ တံတားတွေ…ဘာလို့ ဆေးမသုတ်လဲ မသိ….